Berry | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Nri oriri na ọṅụṅụ: mụta ihe nzuzo nke na-eto eto
Anyị nile na-echeta akụkọ nke apụl "na-eto eto," ma ọ bụ mmadụ ole na ole maara na okike nwere "elixir nke ntorobịa" ya. Ọ bụ ntakịrị beri bred, ọ na-akpọ honeysuckle. Ebee ka ihe atụ a sitere? Nri oriri na mmanụ aṅụ nwere ọtụtụ ọnụ ahịa bara uru. Na beri a, enwere ihe di omimi - omenium, nke nyere ndi ntorobia n'onu nke aru.
Mmanụ aṅụ na-eji, uru ma na-emerụ ahụ ahụ
Mmanụ aṅụ - osisi shrub, mkpụrụ osisi na-acha uhie uhie na-amị mkpụrụ. N'oge ahụ, e nwere ihe dịka 190 mara. Ọtụtụ n'ime ha si mba Asia. N'isiokwu a, anyị ga-atụle mmanụ aṅụ dịka ọgwụ ma chọpụta ihe niile bara uru na ime mkpesa nke osisi a.
Blackberry pests: mgbochi na ịchịkwa
Na-arịwanye elu, ndị nwe ala na ụlọ obibi na-amalite na-eto eto. Nke a perennial shrub na-enye delicious ma kemmiri ihe ọchịchịrị-acha tomato. Mkpụrụ osisi nwere ọtụtụ ihe bara uru. Mkpụrụ osisi blakberị na-eto eto bụ usoro mgbagwoju anya na-ewe oge. Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ adịghị eguzogide frosts, ọ dị mfe n'ọtụtụ ọrịa, ọtụtụ pests na-eme ka nlekọta nke osisi ahụ sie ike.
Blackberry Thornfrey: uru, ọghọm, dabara na nlekọta
The blackberry bụ subgenus nke ezinụlọ Rubus nke Pink ezinụlọ. Berry na uche dị nnọọ ka ọgwụ raspberries na-agwọ ọrịa. Na Europe, blackberry adịghị etolite, mana na America ọ bụ otu n'ime mkpụrụ osisi kachasị mkpa. Blackberries si Mexico bụ ụmụ amaala, a na-ebupụ ihe ubi niile na USA na Europe. Na mba anyị, osisi ohia na-etolite n'ọhịa, mana ekele maka ihe ngwọta ya na ọkpụkpụ ya, blackberry na-enweta nkwanye ùgwù na ubi ubi.
Ihe ọṅụṅụ na-atọ ụtọ ma na-egbuke egbuke sitere na America ma gbasaa n'ọtụtụ mba nke ụwa. N'ime usoro mmeba, o jisiri ike gbanwee ọnọdụ dị iche iche nke ihu igwe, ma ugbu a ọ na-eji ya n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Iji eme ihe abụghị nanị na ị na-eri nri. Blackberry nwere mmetụta ọgwụgwọ n'ahụ ahụ mmadụ.
Iwu maka ịkụ na ịchekwa blackberry na-ekwenye ekwenye "nnukwu"
Blackberry bụ osisi shrimp nke sitere na ezinụlọ Rosaceae, na-eto eto na ugwu ugwu na ọnọdụ dị ichiiche nke Eurasia, na oke ọhịa dị iche iche, ọdọ mmiri na-asọ oyi na mmiri, na-ezighi ezi, n'ogige na n'ogige. Ị ma? Blackberry nwere ọ bụghị nanị mma mara mma, ma ọ na-erite uru n'ahụ. Nri Blackberry ga enyere aka belata okpomọkụ, bioflavonoids dị na ya normalize ahụ okpomọkụ.
Ihe kachasị ewu ewu dị iche iche nke blakberị
Onye ọ bụla nke na-ata ahụhụ n'ihu ọbara n'oge ọ na-ehicha mkpụrụ osisi blak, ga-eji obi ụtọ kụọ n'ubi ya osisi a sitere na ezinụlọ pink, ndị na-enweghị ndị na-azụ anụ ọhịa. Ihe dị iche iche nke blackberry na-abụghị nke a ga-enye gị ohere ịgha mkpụrụ n'ubi bara ụba, na-enweghị etinye mgbalị dị ukwuu ma ọ bụ na ịhicha onwe ya maọbụ na ilekọta osisi na-adịghị mma.
Ụzọ nke owuwe ihe ubi dogwood maka oyi
Cornel bụ osisi shrub ma ọ bụ osisi dị mkpirikpi, si na Caucasus kwaga anyị, a na-agbanyekwa ya mkpọrọgwụ n'ala ndị Ukraine, Moldova na Russia. Dogwood sụgharịrị n'asụsụ Turkic pụtara "uhie". Osisi ya acha uhie uhie nwere nnukwu ihe anthocyanins, vitamin C na becti pectin. Uru nke cornel Cornel bụ ụlọ nkwakọba ihe nke nri na vitamin.
Strawberry Victoria: ndụmọdụ kachasị mma maka ịkụ na ịchekwa
Anyị ga-agwa gị gbasara nzuzo nke ịkụ na ịlekọta strawberries "Victoria." Mgbe ị na-amụ ha, ị ga-aghọ ezigbo ubi ubi. Kedu ihe dị iche n'etiti "Victoria", strawberries na strawberries "Victoria" - bụ aha otu n'ime mkpụrụ osisi strawberry. Ihe dị iche n'etiti strawberries na strawberries bụ na strawberries na-eto n'ubi, na strawberries na-eto n'ime oké ọhịa.
Ụdị dogwood kachasị ewu ewu
Dị ka ọ na-achị, nkịta dogwood nwere oke mma na-eguzogide ọnọdụ ihu igwe na oyi na-adịghị na ọnọdụ nke ala, nke nwere ike ịbụ stony, limestone, akọrọ, wdg. Nnukwu osisi mgbọrọgwụ, iru mita dị omimi, na-ekwe ka dogwood nweta mmiri .
Ịhọrọ oge oyi oyi blackberry
Winter-hardy blackberry iche dị nnọọ ewu ewu na-etolite cultivation n'ihi na ha uto, uru Njirimara, iguzogide ntu oyi, ọrịa na pests. E nwere ezigbo ụdị dị iche iche. Anyị na-eme ka anya gị mara akara nke mkpụrụ blackberry. Agave Nke a dị iche iche ihe karịrị otu narị afọ gara aga bred na America.
Blackberry Black Satin: uru na ọghọm, dabara na nlekọta
The blackberry bụ nke Rubus genus na onye so na pink pink. Osisi ahụ na-etolite na ugwu ugwu na ọnọdụ ugwu, na agwakọta aghara aghara aghara. Ọtụtụ mgbe, bushes na-eto na floodplains nke osimiri, ọhịa-steppe mpaghara. Osisi ahụ malitere ịmalite ntoju n'etiti etiti June ma mechie n'August. Na otu ohia ị nwere ike ịhụ okooko osisi, mfri eke na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Mgbochi, pụtara na usoro nke pesti mkpụrụ
Raspberries - ọdịbendị kachasị mma nke ọtụtụ gardeners. A na-enwe ekele maka mkpụrụ osisi jupụtara na ọ bụghị nanị maka uto dị mma, kamakwa ama ama maka uru ha bara uru. Mkpụrụ nke osisi nwere mgbochi mkpali, mmetụta antipyretic, mụba ụda nke ahụ ma nye ume, nyere aka ịlụso ọgụ ọgụ. Otú ọ dị, n'ihi na ị na-arụ ọrụ nke ọma, ịkwesịrị ịma otú ị ga-esi merie pests.
Blackberry Chester N'uba: uru na ọghọm dị iche iche nke ụdị dịgasị iche iche, kụrụ ma lekọta
Ndị ọkà mmụta sayensị ewepụtawo ụdị ụdị blackberry, otu n'ime ha bụ nke na-abụghị nke dị iche Chester Thornless. Ọ na-apụta n'etiti ndị ọzọ na-eguzogide elu na-edozi ahụ, nakwa dị ka uto dị mma. Blackberry Chester Thornless wee hụ ndị na-elekọta ubi n'anya n'ihi enweghị ogwu na nnukwu tomato.
Nkọwa nke ụfọdụ ụdị yoshta
Ọ bụghị onye ọ bụla na-elekọta ubi maara aha "yoshta". N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị na-ahụ maka ogige-ndị beri hụrụ anyị na-enwe mmasị na osisi shrub a, ọ bụ ezie na ngwakọ ahụ nọghachiri na 80s. Ọ na-adọrọ mmasị n'ihi na a ga-ewe ihe ubi ahụ ruo ogologo oge na akụkụ - tomato ripen unvenly.
Na-eto eto blueberries: kere ma na-elekọta
Blueberries adịlarị mara na mpaghara anyị, ma ọ bụghị onye ọ bụla na-achọ ịzụlite ya. Ụfọdụ ndị na-elekọta ubi na-ekwenye na nsogbu ahụ na osisi ahụ karịa ihe ubi. Ndị ọzọ amaghị otú e si eto ya. Anyị nwere olileanya na ihe a ga-enyere onye ọ bụla aka ịzụlite osisi. Blueberry: nkọwa nke osisi bluuberi bụ osisi shrub nke ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara dịka ogwugwu ọgwụ.
Yoshta ozuzu iwu: gardeners Atụmatụ
Ihe iri afọ atọ gara aga, ngwakọ ahụ na-aga n'ihu na-emeri obi ndị na-elekọta ubi. Na yoshte e nwere ihe goozberị, kama nke ahụ, ọ dị ka currants. Ngwakọ ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdaba na ọrịa ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla. N'adịghị ka currants, ọ nwere ike ịmalite ọbụna na mpaghara ndị kpọrọ nkụ. Yoshta bara uru nke ukwuu bụ na tomato ya chara n'onwe ya, ọ ga-abụkwa na ị ga-ahụ mkpụrụ rere ure mgbe owuwe ihe ubi.
Nhọrọ nke ntụziaka kachasị mma maka ịbịakọta ugwu ash (chokeberry) na-acha mkpụrụ osisi na-eri maka oyi
Mkpụrụ tomato nke chokeberry nwere ike ịnọ n'elu osisi ogologo oge ma ọ bụrụ na nnụnụ anaghị eri ha. A p ur u iji ha mee ihe oh ur u, i nwekwara ike ime ha di iche iche. Banyere otú e si egbute anụ ọhịa wolf maka oyi, ihe anyị na-esote. Oge ịchịkọta tomato nke chokeberry Iji kwadebe kwadoro na-atọ ụtọ ma zute atụmanya, ịkwesịrị ịma mgbe ị ga-aghọrọ tomato.
Otu esi eto nwa eze: kuru na ichekwa
Di eze, dika omenala ugbo, ndi oru ugbo ugbo ugbo a adighi ama ya, ebe obu na onodu ogugu ndi ozo di nso na ya. Otú ọ dị, beri a maara nke ọma na oge ochie nke Russia, mgbe eji ya na nri. Okwu nke ịkọ na ịhọrọ ebe. Mpaghara nke ndị isi: n'oge opupu ihe ubi - afọ iri mbụ nke May, n'oge ọdịda - afọ nke abụọ nke ọnwa Septemba.
Ojiji nke cloudberries: uru na nsogbu ahụ
Cloudberry bụ osisi nke anụ osisi nke a hụrụ n'ọhịa mmiri ndị na-acha na apịtị na Russia na Belarus, nakwa nke dị na mpaghara tundra (mpaghara polar-arctic). Ya acha uhie uhie-ụtọ tomato, nwere aha yiri, bụ nnọọ ihe bara uru na tọrọ ụtọ. Ngwurugwu chemicals nke tomatoberry tomato Cloudberries bụ ọgaranya karịsịa na vitamin na eriri.